နန်းကြာညို – Hlataw.com
စီမံကိန်းအတွက်ဆိုကာ ခြံခတ်သိမ်းစည်းသွားတဲ့ လယ်ယာတွေကို ကြည့်ပြီး နန်းကြာညို သက်ပြင်းချမိပြန်သည်။ ဒီလယ်ယာတွေကို အနိုင်ကျင့်သိမ်းယူသွားကတည်းက သူမတို့မိသားစုအပါအဝင်တစ်ရွာလုံး ဒုက္ခရောက်နေရသည်။ လယ်ကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်တတ်သော လယ်သမားတွေ ဘိုးဘွားပိုင်လယ်မြေတွေ မရှိတော့သောအခါ ဘဝပျက်ကြသည်။ အလုပ်အကို သစ်အတွက်မြို့တတ်သွားတဲ့သူတွေရှိသလို ကြွေးလည်ပင်းနစ်ကာ စီးပွားပျက်အပူမီးတောက်နေသော သူမတို့တွေလည်းရှိသည်။ ရွာဦးစေတီလေးတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ထိုင်နေရင်း သက်ပျင်းအထပ်ထပ်ချမိသည်။ ရောက်ရှိလာမဲ့ မနက်ဖြန်တိုင်းကို ကြောက်မိပါသည်။ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပင် သူမအိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ ခြောက်ကပ်နေသော အိမ်ဝိုင်းလေးအတွင်းသို့ ဝင်လိုက်သည်နှင့် ဝမ်းနည်းစိတ်က ကြီးစိုးလာပြန်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခန့်ကထိ သူမတို့လယ်ယာလေးနဲ့ မချမ်းသာပေမဲ့ချောင်လည်စွာနေထိုင်နိုင်ပါသည်။ လယ်ယာတွေအသိမ်းခံရပြီးနောက်မှာ မိခင်ဖြစ်သူက နှလုံးရောဂါဖြင့်ဦးစွာဆုံးပါးသွားသည်။ နောက် အကြွေးတွေများများလာတော့ ဖခင်ကြီးလဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျကာ မိမိကိုယ်ကို သက်သေသွားသည်။ အသက် ၂၁နှစ်အရွယ် အပျိုမလေး နန်းကြာညိုတစ်ယောက်သာ ဒုက္ခတွေနဲ့ကျန်ခဲ့သည်။ နန်းကြာညိုက အသက် ၂၁နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီမို့ အဝေးသင်နဲ့ ဘွဲ့ရပြီးသား။ သို့ပေမဲ့ ရွာမှာပင်မိဘတွေနဲ့ ဒိုးတူဘောင်ဖက် လုပ်ကိုင်ကာနေသဖြင့် တခြားအလုပ်လဲမလုပ်တတ်။ ကျေးရွာသူမို့ ယက္ကန်းခတ်တာ စက်ချုပ်တာတွေလုပ်တတ်ပေမဲ့ အရင်းအနှီးကမရှိ။ သူများဆီဝင်လုပ်ပြန်လျှင်လည်း စားဖို့လောက်သာရသည်မို့အခက်တွေ့နေရှာသည်။ ည၈နာရီထိုးလောက်ကျတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ကားတစ်စီးလာရပ်သည်။
သူမကြောက်ရွံ့နေတဲ့ အရာက နေ့မကူးခင် ညဦးပိုင်းကတည်းကရောက်လာပြီ။ ခဏအကြာမှာ ခြံထားခါးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွန်းဖွင့်သံနှင့်အတူ အိမ်ပေါ်ကို မိန်းမတစ်ယောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်တတ်လာသည်။ အမျိုးသမီးမှာ ဒေါ်နှင်းဆီဖြစ်ပြီး သူမတို့ရဲ့ အကြွေးရှင်လည်းဖြစ်သည်။ ဘေးကပါလာတာကတော့သူ့ခင်ပွန်း ရွာလူမိုက်မိုးသီးဖြစ်သည်။ အပေါ်ရောက်တော့ ခုံမရှိတဲ့သူမတို့ရဲ့ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်းကျုံ့ကျုံ့လေး ထိုင်နေတဲ့သူမရှေ့ စာရွက်တစ်ရွက်ချပေးသည်။ စာချုပ်ပါ ။ သူမတို့ရဲ့အိမ်ကို ပေါင်ပြီး ပိုက်ဆံချေးထားတဲ့စာချုပ်ပါ။ စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ပြီဆိုတော့ သူဌေးက မင်းအိမ်ကို တရားဝင်သိမ်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်သိမ်းလိုက်ရင်တောင် အကြွေးတွေက ကျန်နေတုန်းပဲ…….။ မင်းဘယ်လိုရှင်းပေးမှာလဲ……။ ကျွန်မမှာ ပေးစရာ တပြားမှမရှိပါဘူးရှင်……တောင်းပန်ပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုလည်း မရှိရှိတဲ့ မင်းကို ပဲ အကြွေးအတွက် သိမ်းသွားရမှာပေါ့…..။ ဒေါ်နှင်းဆီစကားကြောင့် နန်းကြာညို မျက်လုံးလေးပြူးကာ အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ရှင် ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်……ဟူ၍ အသနားခံပေမဲ့ ဒေါ်နှင်းဆီက ဂရုမစိုက် သူ့လက်ကိုင်အိတ်ထဲ အသင့်ယူလာတဲ့ လက်ထိပ်လေးနဲ့ နန်းကြာညိုရဲ့ လက်တွေကို လက်ပြန်ခပ်လိုက်သည်။ အဖြစ်အပျက်ကမြန်ဆန်လှသလို ဒေါ်နှင်းဆီ ဒီမျှထိလုပ်လိမ့်မည်ဟု မထင်မှတ်ထားသဖြင့် နန်းကြာညိုလေးခင်ဗျာရုန်းချိန်ပင်မရလိုက်ရှာ။ သူမအော်ဟစ်ရန်အကြံနှင့်ပါးစပ်ဟလိုက်သည်နှင့် ဒေါ်နှင်းဆီက လက်ကိုင်ပဝါတစ်ထည်ကို ထိုးထည့်လိုက်ရာ ဝူးဝါးနှင့် မပီမသံသံလေးတိုးတိုးသားထွက်လာသည်။ မျက်ရိပ်ပြလိုက်တော့ မိုးသီးက နန်းကြာညိုကို ချီမကာ ကားနောက်ခန်းထဲထည့်ပြီး အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာသည်။
နှင်းဆီ….နင်သူ့ကြို ဘယ်လိုလုပ်မှလဲ ရွာသားတွေသိသွားရင်မလွယ်ဘူးနော်…… ရတယ် ငါဒီညတွင်းချင်းမြို့တတ်ပြီး ဦးမင်းညိုကို ရောင်းလိုက်မယ်။ နင်ဒီအိမ်မှာစောင့်နေ…..။ ရွာသားတွေမေးရင် သူ့အမျိုးတွေဆီ ညတွင်းချင်းထွက်သွားတယ်လို့ပြော…..။ ဟုမှာကာ ကားပေါ်တတ်ကာမောင်းထွက်လာသည်။ ဦးမင်းညိုဆိုတဲ့ ရွာနဲ့မနီးမဝေးမြို့က အသက ၃၅နှစ်အရွက်သူဌေးတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ ခရိုနီတွေ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိသူမို့ အရှိန်အဝါလည်းကြီးသည်။ ဦးမင်းညိုတို့အိမ်ရောက်တော့ ၁၀နာရီထိုးနေပြီ။ ကြီးကျယ်လှတဲ့အိမ်ကြီးထဲက ဧည့်ခန်ူမှာ သူမတို့က မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး နန်းကြာညိုကတော့ ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်နေမိသည်။ ကိုမင်သညို တစ်ယောက်လိုတယ်ဆိုလို့လာပို့တာ…… ဦးမင်းညိုဆိုသည့် ရုပ်ရည်သန့်သန့်နဲ့လူကြီးကို သူ့ရဲ့ မျက်လုံးအေးကြီးတွေနဲ့သူမကို စွေကြည့်ကာ နောက်ကြောင်းကောရှင်းရဲ့လားဒေါ်နှင်းဆီ…. ရှင်းပါတယ် သူကမိဘမဲ့ပါ…..။ ကျွန်မကြွေးမဆပ်နိုင်လို့ သိမ်းလာတာ…..။ ကောင်းပြီလေ ဈေးပြော…… ဈေးကတော့ ကျပ်……………ပဲပေးပါ။ ဦးမင်းညိုက ဘာမှမပြောပဲစဉ်းစားနေသသည်။ ဒေါ်နှင်းဆီက ထပ်၍ များတယ်ထင်လို့လား…..။ အပျိုစင်လေးနော် နောက်ကြောင်းလဲရှင်းတယ် အရင်လူတွေလို ပြန်လွှတ်ပေးစရာလဲမလိုဘူး စိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းပြီး တစ်သက်လုံးအုထားလို့ရတယ်။ ပြောနေတဲ့စကားတွေကို အတိုင်းသားကြားနေရတော့ နန်းကြာညိုရဲ့ ရင်ထဲ ဝမ်းနည်းမှုက လှိုက်တတ်လာတယ်။ လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါလျှက် ရောင်းကုန်တစ်ခုလို ရောင်းဝယ်နေကြသည်လေ…..။ မကြာခင်မှာဈေးတည့်သွားပြီမို့ ဦးမင်းညိုထံ လက်ထိပ်သော့ကို အပ်ကာထွက်ခွာသွားလေပြီ။ သည်တော့မှ ဦးမင်းညိုကခပ်ကျုံကျုံ့လေစထိုင်ကာ ငို ကြွေးနေသော နန်းကြာညိုကို ကြည့်သည်။ အသားဖြူဖြူနှင့် လှရက်သည့်မိန်းကလေး ထိရက်စရာပင်မရှိ။ သို့သော ပေးလိုက်ရသည့် ပိုက်ဆံနှင့်တန်အောင်ထိရပေမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်ရမှထကာ နန်းကြာညိုကို လက်မောင်းကနေဆွဲပြီး အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်သွင်းရသည်။ နောက်ခုတင်ပေါ်ခပ်ကြမ်းကြမ်းပစ်တယ်ကာ ပက်လက်ကလေးဖြစ်နေသော သူမပါးစပ်ထဲက စို့ထားတဲ့ အဝတ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါမှာ နန်းကြာညိုလည်း အသက်ကို ဝအောင်ရှူရသည်။
နောက် ဦးမင်းညိုကို အသနားခံဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သူမပါးစပ်မဟရခင် ဦးမင်းညိုက ကပ်ကျေးတစ်လက်ကိုယူကာ သူမရဲ့ အဝတ်တွေကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ညှပ်ဖြဲလိုက်သည်။ သိပ်မကြာလင်မှာပင် အဝတ်အစားဟူ၍ တစ်စမှမကျန်အောင်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားသည်။သူကိုယ်တိုင်လဲ အဝတ်တွေချွတ်လိုက်ကာ ဦးမင်းညိုက မလုပ်ပါနဲ့ဟုတောင်းပန်နေသော နန်းကြာညိုရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံ့နမ်းလိုက်သည်။ လက်တွေကလဲ ငြိမ်ငြိမ်မနေ……။ တင်းရင်းလှပသော နန်းကြာညိုရဲ့ ရင်အစုံကို ဖျစ်ညှစ်စုပ်နယ်နေသည်။ နောက်တော့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံ့ကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံ့စို့သည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိပေးသည်။ နန်းကြာညိုတစ်ယောက် မအော်ဟစ်နိုင်တော့ ။ လက်ထိပ်ခတ်ခံထားရသည်မို့ ကိုယ်ပေါ်က အထိအတွေတွေကို အလိုမတူစွာခံယူရင်း ထွန့်ထွန့်လူးနေရှာသည်။ နောက်တော့ဦးမင်းညိုက သူမရဲ့ ရွှေကျုပ်ကလေးကို လျှာနဲ့ ပြုစုပေးပြန်သည်။ အင်း….ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ…အား…….ဟုသာ ညည်းရင်းနေရရှာသည်။ ခဏနေတော့ ဦးမင်းညိုကာ နန်းကြာညိုကို ဆံပင်တွေဆွဲကာ ဒူးထောက်စေပြီး ခပ်ဟဟပွင့်နေတဲ့ သူမရဲနှုတ်ခမ်းတွေထဲကို သူ့ရဲ့ လိင်တံကြီးထိုးသွင်းကာ စုပ်စေသည်။ အလိုမတူပေမဲ့ရုန်းလဲမရုန်းနိုင်တာမို့ ခိုင်းသမျှကို ရွှံ့ရှာစွာလုပ်ရသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပင် နန်းကြာညိုကို ခုတင်ပေါ်တွန်းလှဲကာ သူ့ရဲ့လိင်တံကို အပျိုစင်ရွှေကျုပ်ကလေးထဲထိုးသွင်းကာ သူမရဲ့စင်ကြယ်မှုကို စားသုံးလိုက်တော့သည်။ ခပ်သန့်သန့် ဘီယာဆိုင်ကလေးရဲ့ သီးသန့်ခန်းတစ်ခုတွင် မင်းညိုတို့ မိတ်ဆွေသုံးယောက် ဘီယာသောက်နေကြသည်။ -ကိုမင်းညို အကို့ဆီမှာ ဒေါ်နှင်းဆီ ဆီက အသစ်လေးတစ်ယောက် ဥထားတယ်ဆို…… သောက်ရင်းစားရင်း ကိုရဲဝေက မေးခြင်းဖြစ်သည်။ -အေးကွာ ရုပ်ရည်သနားကမားလေးဆိုတော့ သူ့ဆီမှာဆို ဖာတန်းရောက်သွားမှာဆိုးလို့ ခေါ်ထားတာ…..။ -အံမာ မသိရင် သူကပဲ အလှထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲ…..။ ကိုမင်စညိုရဲစကားကြောင့် မြတ်မိုးက ပြောပြီးရယ်သည်။ ရဲဝေနဲ့ ကိုမင်းညိုလည်းလိုက်ရယ်ကြသည်။ -ဒါကတော့ကွာ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားရတာဟ တန်အောင်တော့သုံးပေးရမှာပေါ့ -ကျွန်တော်တို့ကိုလဲမျှဦးလေဗျာ…… -ဟေ့အေး မမျှသေးဘူး……. -ဟာ တွန့်တိုနေပါလားကောင်မလေးက တော်တော်လှတယ်ထင်ရဲ့ ဘာလဲ မမနွယ်ကို မယူခင်ကတည်းကရာထူးတိုးထားပေးမလို့လား မြတ်မိုးစကားကြောင့် ကိုမင်းညို နန်းမြနွယ်ကို ဖြတ်ကနဲသတိရမိသည်။ မကြာခင်သူနဲ့လက်ထပ်တော့မဲ့ သူ့ချစ်သူ ကျောင်းဆရာမလေး……။
သူ့ထက် ၇နှစ်လောက်ငယ်တယ်။ မြတ်မိုးတို့ကတော့ သူနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆိုပေမဲ့ နန်းမြနွယ်ထက်တောင် ၃နှစ်လောက်ငယ်သည်။ ၂၅ နှစ်အရွယ်ချာတိတ်တွေပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ၂ယောက်လုံး အိမ်ထောင်ရှင်တွေ……။ မြတ်မိုးက သူ့ထက်၂နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ ယဉ်မင်းစင်ဆိုသည့် ဆရာဝန်မတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ထားသည်။ နောက် ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံ နှစ်ခုလောက်လဲ ဖွင့်ထားနိုင်သဖြင့် အရေးကြီးသည့် ကေ့တွေကလွဲပီးသိပ်အလုပ်လုပ်စရာမလို….။ ရဲဝေကတော့သူနဲ့ရွယ်တူ မြမြဦးဆိုသည့် ကောင်မလေးနှင့် လက်ထပ်ထားသည်။ ရဲဝေက မြမြဦးကို အလုပ်မလုပ်စေပဲ အိမ်မှာပင်ထားကာ သူဘာသာ ပိုက်ဆံရှာသည်။ သုံးယောက်လုံးက စိတ်တူ ကိုယ်တူတွေမို့ ဂျီတော့ မှတဆင့်ပေါင်းမိသွားခြင်းဖြစ်သည်။ -ငါစဉ်းစားထားတာ တစ်ခုရှိလို့ကွ…… -ဘာများလဲ ကိုမက်းညို……. -ဒီလိုကွာ မြတ်မိုး မင်းမမစင်နဲ့ သဘောတူညီမှုရပြီးသွားပြီပဲ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ပုံသွင်းလို့အဆင်ပြေလား……..။ မြတ်မိုးက ခေါင်းခါသည်။ -မရဘူး ကိုမင်း…..။ သူမျက်ရည်လေး နဲနဲဝဲသွားရင်ကို ကျွန်တော့်မှာ နေစရာနေရာအရှိတော့ ဘာမှဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ သူကတော့ပြောရှာပါတယ်။ လုပ်စရာရှိတာလုပ်ပါတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ရက်တော့ဘူး….။ မင်းညိုက ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်သည်။ နောက်တော့ ရဲဝေကို မေးငေါ့ပြကာ -မင်းကော သူ့လို ပဲမှတ်လား…… ရဲဝေလဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ -ငါနဲ့နွယ်ဆိုလဲ အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာ။ သူ့တို့ကို ငါတို့ကအရမ်းချစ်တော့ မထိရက်မကိုင်ဖြစ်နေတာလေ။ ငါကြံထားတာက ကောင်မလေးကို စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းပေးပြီးရင် သူ့လက်ကို ငါတို့မိန်းမတွေ အပ်လိုက်မလားလို့…..။ မင်းညို စကားကြောင့် ကျန်နှစ်ယောက်လဲ စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ရဲဝေက -ဖြစ်ပါမလား အကိုရာ။ ကောင်မလေးက အကို့ကို နာနေမှာနော် တော်ကြာ ကလန်ကဆန်တွေလုပ်ပြီးသစ္စာဖောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…..။ -ဒီတိုင်းတော့ လွတ်ပေးလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ငါကသူ့ကို စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းပေးဦးမှာပါ။ ကိုယ်ချစ်သူကို သာမထိရက်တာ တစိမ်းမိန်းကလေးကတော့ လာထားပဲ ဟားဟားဟား……။ – ကဲအောင်မြင်ပါစေဗျာ……. ခွပ်။ ဘီယာခွက်တွေကို ဖန်ခွက်ချင်းတိုက်ကာ တစ်ကျိုက်ထဲ မော့ချလိုက်ကြသည်။ လူခေါ်ဘဲလ်ကို နှိပ်ပြီး ခဏအကြာ အတွင်းသစ်သားတံခါးကို ဖွင့်သံနှင့်အတူ နန်းကြာညို တံခါးဝမှာ ပေါ်လာသည်။
မင်းညိုကိုမြင်တော့မှာ ဘာဂျာတံခါးကို ဖွင့်ပေးသည်။ သူအထဲရောက်တော့ သူဝယ်လာတဲ့ ကြာဇံကြော်ထုပ်ကို ယူကာ အမြင့်တစ်နေရာမှာ ခဏတင်ထားသည်။ နောက်သူ့ခြေရင်းတွင်ဒူးတုပ်ထိုင်ချကာ သူ့ဝတ်ထားတဲ့ဖိနပ်ကို တရိုတသေချွတ်ပေးရသည်။ ပြီးတော့မှာ သူကို လမ်းဖယ်ပေးရင်း တံခါးဝဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေသည်။ အိမ်နေရင်းမို့ တီရှပ်အနွမ်းတစ်ထည်နဲ့ လုံချည်တစ်ထည်ကို ဝတ်ဆင်ထားသော နန်းကြာညိုက ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးလှနေသည်။ လည်ပင်းမှာ တပ်ပေးထားသော ကော်လာလေးက သံကြိုးလေးက တွဲလောင်းလေးကျနေသည်က သူ့ကို ဆွဲဆောင်နေသည်။ -ကဲ မင်းစားလိုက်ဦး ပြီးရင် အခန်းထဲလာခဲ့ -ဟုတ်ကဲ့……..။ကျေးဇူးပါရှင့်…….။ အထုပ်လေးဆွဲကာ ကြာညိုက ထမင်းစားခန်းထဲမှာစားသောက်ရသည်။ နောက် ပန်းကန်တွေကို တစ်ခါတည်းဆေးကာ မင်းညိုရှိရာ အခန်းကို တတ်ခဲ့သည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ မင်းညို ကသူမအဝတ်တွေကို ခွတ်စေငည်။ ထူးတော့မထူးဆန်းပါ။ ညတိုင်းနီးပါး ခံနေရတာမို့ ငြင်းလဲမငြင်းရဲသည်မို့ သူ့စိတ်တိုင်းကျလုပ်ပေးရသည်။လည်ပတ်ကိုပါချွတ်ပေးပြီး ခုတင်ပေါ်ထိုင်စေကာ လက်ပြန်ကြိုး တုပ်သည်။ လက်ကောက်ဝတ်တွေ သာမက ရင်ဘက်တွေ လက်မောင်းတွေပါ တုပ်ထားသဖြင့် ရုန်းဖို့မပြောနဲ့ လှုပ်ပင်မလှုပ်သာ။ မင်းညိုက သူမကို ခုတင်ပေါ်တင်လျှက် အိပ်စေသည်။ နောက်တော့ မင်းညိုလည်း ဘေးနားမှာ လှည်းချကာ နန်းကြာညိုရဲ့ ကောက်ညှင်းထုပ်ကိုယ်လုံးလေးကို ပွတ်သပ်ဖက်ရက်ရင်း အိပ်သွားသည်။ နန်းကြာညိုမှာသာ မလူးသာမလွန့်သာနှင့် ရင်တဖိုဖိုဖြစ်ကာ အိပ်မပျော်ဘဲရှိသည်။ နောက်ရက်တွေကစပြီး နန်းကြာညိုကို မင်းညိုက စိတ်ကူးရှိသလို ပုံသွင်းပါသည်။ အရင်လို အိမ်ထဲမှာပဲ ချုပ်နှောင်ထားတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ အပြင်တွေဘာတွေလဲလွှတ်တတ်သည်။ အဲအမှားတစ်ခုခု ကျူးလွန်မိလျှင်လည်း ကျောကော့အောင် အရိုက်ခံရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် နန်းကြာညိုက အမှားတွေ မလုပ်ရဲ။ ကားမောင်းသင်ပေးသည်။ စိတ်ပညာစာအုပ်တွေဖတ်ရသည်။ ကြိုးတုပ်ကြိုးချည်ပညာသင်ရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ မင်းညိုကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေပေးရသည်။
တစ်နေ့တော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ကာ မင်းညိုက နန်းကြာညိုကို ပြောသည်။ အဓိကကတော့ သူတို့သုံးယောက်တိုင်ပင်ထားသောကိစ္စကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပင်။ သုံးနှစ်တိတိ လုပ်ပေးရမယ်။ ငွေဝယ်ကျွန်တစ်ယောက်လို မဟုတ်ပဲ လခလဲပေးမည်။ သုံးနှစ်ပြည့်လျှင် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမည်ဟု ဆိုသဖြင့် နန်းကြာညို ဝမ်းသာသွားသည်။ ထို့ကြောင့် သူအစီအစဉ်ကို လက်ခံလိုက်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပင် မင်းညိုတစ်ယောက် သူ့ချစ်သူနန်းမြနွယ်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်သည်။ လက်ထပ်ပြီး မင်္ဂလာဦးည သတို့သားသတို့သမီး ချစ်ရည်လူးကြသည်။ ပုံမှန်ပင် ။ နောက်နှစ်ရက်လောက် နှစ်ဦးသားသာမာန်ဘဝမှာနေထိုင်ကြသည်။ သုံးရက်မြောက် တနင်္လာနေ့……။ နန်းမြနွယ်တစ်ယောက် မင်းညိုအတွက်အဝတ်တွေထုတ်ပေးရင်းစောင့်နေသည်။ မကြာခင်ကြုံရမဲ့ ဘဝသစ်အတွက်ရင်တွေခုန်နေသည်။ မင်္ဂလာဦးညကပင် သည်လောက် ရင်မခုန်ခဲ့ ။ မကြာခင်မှာပင် မင်းညိုက ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာကာ သဖြင့် အင်္ကျီအဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်သည်ကို စောင့်ပြီး နှစ်ဦးသား ထမင်းစာခန်းသို့ဆင်းလာကာ နန်းကြာညို ပြင်ပေးထားသော မနက်စာကို သုံးဦးသားစားလိုက်ကြသည်။ စားပြီး ကော်ဖီသောက်နေချိန် မင်စညိုက -နွယ်…… -ရှင် ကို…….. -ဒီနေ့နွယ့်အတွက် ဘဝသစ်စပြီနော်……… -နွယ် အဆင်ပြောပါ့မလား………. -ပြေမှာပါ နွယ်လဲ အဲ့လို နေချင်ပါတယ်………။ နန်းမြနွယ်ရဲ့ လိုက်လျောမှုကြောင့် မင်းညို ကျေနပ်စွာ ပြုံးသည်။ ထို့နောက်နန်းကြညို ကို ကြည့်ကာ -ကဲ ကြညို …နွယ့်ကို မင်းလက်အပ်လိုက်ပြီး ခုကစပြီး မင်းကသူ့အထိန်းတော်ပဲ စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းကျောင်းပေတော့….။ -စိတ်ချပါ အကို…… -ကဲကိုအလုပ်သွားတော့မယ်နွယ် ဟုဆိုသဖြင့် နန်းမြနွယ်က အိတ်ကလေးကိုင်ကာ ကားရှိရာသို့လိုက်ပို့သည်။ မင်းညိုက သွားခါနည်း နွယ့်နှဖူးလေးနမ်းကာ -လိမ်လိမ်မာမာနေနော်နွယ် ကြာညိုက အရိုက်ကြမ်းတယ်။ -အင်းပါကိုရဲ့ စိတ်ချပါ။ ကားလေးထွက်သွားတော့ မြနွယ် ထမင်းစားခန်းထဲ ပြန်ဝင်ခဲ့တော့ ကြာညိုတစ်ယောက် ကန်းကန်တွေသိမ်းနေတာနဲ့တိုးသည်။ သူမရောက်နေမှန်းသိတော့ ကြာညိုကလှည့်ကြည့်သည်။ မြနွယ်က ကြာညို့ထက်စာရင် ၇နှစ်လောက်ကြီးသည်။ သို့ပေမဲ့ အရပ်အနည်းငယ်ပုကာ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း သေးသေးကျစ်ကျစ်လေးဆိုတော့ အသက်ကြီးသည်ဟုမထင်ရ…….။
ထိုခန္ဓာကိုယ်အလှ ကို မျက်နှာအလှနဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးတွေ ထည့်ပေါင်းလိုက်တော့ မြနွယ်ကို တော်တော်လှတဲ့မိန်းမဟု ကြာညို မှတ်ချက်ချမိသည်။ -ကျောင်းသွားဖို့ပြင်တော့လေ မမ….. 8နာရီထိုးနေပြီ နွယ်လဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ အိပ်ခန်းပြန်ပြီး အိပ်ခန်းနဲ့ တွဲလျှက်ရေချိုးခန်းမှာ ရေမိုးချိုး ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ အပြင်ရောက်တော့ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်စောင့်နေတဲ့ ကြာညိုကိုတွေ့သည်။ မြနွယ်က ကျောင်းဝတ်စံနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေသလို ကြာညိုက ရင်ဖုံးအင်္ကျီအစိမ်းရောင်ဝမ်းဆက်နဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေသည်။ နောက်တော့ အိမ်တံခါးတွေပိတ်ကာ ကြာညိုက မြနွယ်ကို ကျောင်းလိုက်ပို့ဖို့ပြင်သည်။ ခြံတံခါးကို ပိတ်ပြီး ကားထဲ ပြန်ဝင်လိုက်တော့ မောင်းတဲ့ခုံဘေးမှာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထိုင်နေတဲ့ မြနွယ်ကို ခါး ပါတ်ပေးပြီး ပါးလေးကို လိမ်ဆွဲကာ -အမြဲ ခါးပါတ်ပါတ်ရမယ်။ နောက်တစ်ခါဆို သတိမပေးဘူးနော် အပြစ်ပဲပေးမှာ…. ကြာညိုကပြောတော့ မြနွယ်ကပြုံးပြုံးလေးခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ ကြာညိုလဲ ကားကို ကျင်လယ်စွာ မောင်းထွက်လာကာ ကျောင်းအရင်ပို့ပေးပြီး ဈေးသို့ဝင်လိုက်သည်။ ညနေ ၃နာရီလောက်ကျတော့ ကြာညိုက မြနွယ်ကို သွားကြိုကာ ကြိမ်လုံးတွေးရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရှေ့ ရပ်ပေးသည်။ -ကဲမမနွယ်….သွား…. မမအမှားလုပ်ရင် ရိုက်ဖို့ ကြိမ်လုံးငါးချောင်းလောက်ဝယ်ခဲ့…..။ သူမစကားအတိုင်းမြနွယ်တစ်ယောက် ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုင်ကာ ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီး မိမိအရိုက်ခံဖို့ကြိမ်လုံးကို မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးဝယ်ရပါတော့သည်။ ဆိုင်ရှင်ကတော့ ဆရာမတစ်ယောက်ရိုးရိုးတန်းတန်း ကြိမ်လုံးလာဝယ်သည်ထင်ကာ ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ ကြိမ်လုံးတွေထည့်ပေးလိုက်သည်။ နောက်တော့ နှစ်ဦးသာ ဘာမှစကားမဆိုဘဲ အိမ်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ရောက်တော့ ခြံတံခါးတွေ အိမ်တံခါးတွေအရင်လုံအောင်ပိတ်ပြီး ကြာညိုက အဝင်ဝနားက ချိတ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ လည်ပါတ်လေးကို ဖြုတ်ကာ မြနွယ်ကို ပေးသည်။ -လည်ပင်းမှာ ပါတ်လိုက်မမ ။ အဲ့တာ မမရဲ့ အမှတ်အသားပဲ။ ကျောင်းသွာချိန် အပြင်သွားချိန်ကလွဲရင် အမြဲဝတ်ထားရမယ်။ နားလည်လား…….။ မြနွယ် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ကြာညိုက အားသိပ်မထည့်ပဲ မြနွယ်ရဲ့ပါးကို ခပ်စပ်စပ်လေးရိုက်လိုက်သည်။ -ပါးစပ်က ပြောစမ်း…….။ -ဟုတ်ကဲ့ နားလည်ပါတယ်ရှင်…….။ -အေးအဲ့တာဆို လည်ပင်းမှာ ပါတ်လိုက်တော့……..။ -ဟုတ်ကဲ့……..။ မြနွယ်လည်း လည်ပါတ်ကလေးကို သူမရဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့မှာ နေသားတကျ ပါတ်လိုက်သည်။ အဖြူအစိမ်းရယ် လည်ပါတ်ကလေးရယ်ပေါင်းစပ်လိုက်သော အခါ အသစ်စက်စက် အိမ်ထောင်ရှင်ဆရာမလေးမှာ အလှကြီးလှနေတော့သည်။
ထို့နောက် ကြာညိုက မြနွယ်ကို အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်သွားပြီ သူတို့ လင်မယားအိပ်တဲ့ ခုတင်ပို လက်ညိုးထိုးပြကာ -မနက်တိုင်း နိုးတာနဲ့တခါတည်းရှင်းခဲ့ရမယ်နော် မမ…။ နောက် ကိုမင်းညို ရဲ့ ဝေယဝစ္စမှန်သမျှ သေးသေးလေးက အစ မမအကုန်လုံးလုပ်ပေးရမယ်။ အခန်းဘေးက သန့်စင်ခန်းတွေလဲ အမြဲသန့်ရှင်းတေရမယ် ကြားလား……။ -ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်…… ပြောနေရင်း ကြာညိုက မြနွယ်ကို ကြည့်လိုက်သည်။ မြနွယ်က မတ်တပ်ရပ်ရင်း လက်တစ်ဖက်ကို ဘေးချထားက ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်လက်မောင်းကို ကိုင်ထားသည်။ ကြာညိုက မြနွယ်ရဲ့အနောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း မြနွယ်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်သို့ဆွဲယူပြှး လက်ကောက်ဝတ်တွေကို တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ထားစေသည်။ နောက်ခါးကိုလည်းမက်စေသည်။ -နောက်တခါ တစ်ခုခု ပြောလို့နားထောင်နေရင် ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ရှိနေရမယ်……။ -ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် -ကဲလုပ်စရာရှိတာ လုပ်တော့ဟုဆိုကာ ကြာညို ပြန်ထွက်သွားသည်။ မြနွယ်လည်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခုတင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်သည်။ ပြီးတော့ အခန်းသန့်ရှင်းရေးကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု လုပ်ဆောင်ကာ ကျောင်းဝတ်စုံကို ချွတ်၍ ရေလဲထဘီကို ရင်လျှားကာ ကို မင်းညိုရဲ့ အဝတ်တွေကို လျှော်လိုက်သည်။ နောက် မစိုတစို ဖြစ်နေသော ထိုရေလည်ထဘီရင်လျှားလျှက်နှင့်ပင် အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းကာ အနောက်ဘက်က အဝတ်လှမ်းတဲ့နေရာ မှာအဝတ်လှမ်းသည်။ လှမ်းပြီး ရေမိုးချိုးရန် အပေါ်ပြန်တတ်ချိန်……။ -မမရေချိုးတော့မလို့လား…… -အင်း ဟုတ်တယ် ကြာညို…….. မမ ကြာညို ပြောထားတာတွေ လုပ်ပြီးသွားပြီ……။ -အဲ့တာဆိုရေမချိုးနဲ့ဦး ရေချိုးခန်းထဲမှာ ခဏစောင့်နေ ကြာညို….တတ်လာခဲ့မယ်။ သြော်ဒူးထောက်ရင်းစောင့်နေနော်…..။ ပြောပြီးသူမအခန်းထဲဝင်သွားသဖြင့် ကြာညိုလည်း သူမတို့ရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲသို့ ပြန်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဒူးထောက်ရင်းစောင့်နေလိုက်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပင် နမ်းကြာညိုလည်း ရင်လျှားလျှက် ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာသည်။ ကြာညို ဝင်လာမှန်းသိတော့ မြနွယ်က ဒူးထောက်နေရာမှ မော့ကြည့်သည်။ သူကို ကြည့်နေသော ကြာညို့ရဲ့ စူးရှရှ အကြည့်ကြောင့် အောက်ပြန်ငုံ့နေသည်။ ကြာညိုကာ မြနွယ်ကို မတ်တပ်ထရပ်စေသည်။ -ရေလဲ ထဘီကို ချွတ်ပြီး ကြိုးတန်းပေါ်တင်လိုက်မမ……။
ကြာညိုရဲစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲ မြနွယ်သူမရဲရေလဲကို ခွတ်ကာ ကြိုးတန်းပေါ်တင်လိုက်သည်။ နောက် သူမရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးလှပတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့အနိုင်နိုင်ဖုံးကာ ကြာညို့ဘက်ပြန်လှည့်သည်။ကြာညို က မြနွယ်အနားကပ်ကာ ရေမစိုအောင်ထုံးထားတဲ့ ဆံထုံးကို စောင့်ဆွဲလိုက်သဖြင့် မြနွယ်နာကျင်စွာညည်းညူးရင်းခေါင်းလေးမော့သွားတယ်။ -ခုဏက မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ ဘယ်လို နေပါလို့ပြောထားလဲမမ…..။ ဂရုမစိုက်တာလား……အလေးမထားတာလား……။ -မဟုတ်……မဟုတ်ပါဘူး မမမေ့သွားလို့ပါ အား…….။ မြနွယ်က ကြာညို သင်ပေးထားသည့်အတိုင်း လက်လေးနှစ်ဖက်ကို နောက်ပြစ်ကာ ပြန်ပြောရှာသည်။ဒီတော့ မှာ ပြန်လွှတ်ပေးလိုပ်သည်။ ပြန်ငုံ့လာသော မြနွယ်ရဲ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတွေဝဲနေသည်။ -ကဲမမ ဒီနေ့ကစပြီး အမှားလုပ်ပြီးတိုင်း အပြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမယ်ကြားလား…….။ -ဟုတ်ကဲ့ မမမှားပါတယ်…..မမကို အပြစ်ပေးပါ…….။ ကြာညိုက တော်တယ်ဟုဆိုက မြနွယ်ရဲ့ ခေါင်းလေးကို ပွတ်သပ်ပေးသည်။ နောက်မြနွယ်လည်ပင်းက လည်ပါတ်ရဲ့သံကွင်းလေးမှာ သံကြိုးသွယ်သွယ်လေးတစ်ချောင်းတပ်သည်။ ရေပုံးအလွတ်နှစ်လုံးကိုယူ၍ တစ်လုံးတွင်ရေထည့်ကာ တစ်လုံးတွင်ရေချိုးခန်းက ပစ္စည်းအနည်းငယ်ထည့်ပြီး မြနွယ်ကို ဆွဲစေက ကြာညိုကာ မြနွယ်ကို လည်ပါတ်ကြိုးကနေဆွဲ၍ ခွေးတစ်ကောင်လို သူ့အခန်းထဲခေါ်သွားလိုက်သည်။ ရေချိုးလျှင်တောင် ထဘီရင်လျှားနဲ့သာ အမြဲချိုးတတ်သော မြနွယ်တစ်ယောက်ခုလို ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားနေရသဖြင့် ရှက်စိတ်ပိုမိသည်။ လည်ပါတ်ကနေ ခွေးတစ်ကောင် အစွဲခံနေရသဖြင့် အားငယ်မှု စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ခံစားနေရသည်။ သူ့အခန်းထဲရောက်တော့ ကြာညိုက ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်ထိုင်နေပြီး ပုံးနှစ်လုံးကို တစ်နေရာတွင်ချစေကာ မြနွယ်ကို သူမရှေ့တွင်မတ်တပ်ရပ်စေသည်။ နောက် ဖြူစင်ချောမွတ်သော မြနွယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရာ မြနွယ် ရှက်ရွံစွာ ခေါင်းလေးငုံ့သွားသည်။ ကြာညိုက ခုဏက ဝယ်လာတဲ့ထဲက ကြိမ်လုံးတစ်လုံးကို ယူလိုက်ပြီး -ကဲမမ အရိုက်ခံဖို့ပြင်ထားတော့ဟုဆိုသည်။ -မြနွယ်လဲ ကြာညိုရှေ့မှာ ဘေးတစောင်းလေးပြောင်းရပ်ကာ လက်ကို ပိုက်ထားလိုက်သည်။ မြနွယ်ရဲ့ တင်ပါးတင်းတင်းကျစ်ကျစ်လေးမှာ ကြိမ်လုံးနဲ့ကပ်လိုက်ပြီ နောက် အားကုန်တစ်ချက်စော်ထဲ့လိုက်သည်။ ရွှမ်းကနဲ အသံနဲ့အတူ ခါးလေးရှေ့သို့ကော့ထွက်သွားသည်။
အစမတန်နာကျင်သွားသော တင်ပါးကို လက်ကလေးတွေနဲ့ပွတ်သပ်နေသည်။ ကြာကြာတော့ မပွတ်သပ်ရဲ ကြာညိုက ကြည့်နေသဖြင့် ကြောက်ကြောက်နဲ့ လက်ပြန်ပိုက်ရသည်။ ရွှမ်း…..ရွှမ်း….ရွှမ်း……ရွှမ်း….. အ…အ…အား…..အမလေး -ပထအဆုံး အကြိမ်မို့ ၅ချက်ပဲရိုက်မယ် နောက်ဆို ဘာအမှား လုပ်လုပ် အနည်းဆုံး ၁၀ချက်ရိုက်မယ် ကြားလားမမ -ဟုတ်ကဲ့ ကြားပါတယ်…… ဟု မြနွယ်တစ်ယောက် ငို သံပါကြီးနှင့်ပြန်ဖြေရှာသည်။ -ကဲသွားနံရံမှီပြီး မတ်တပ်ရပ်နေ……ဆိုတဲ့စကားကြောင့် နံရံကို ကပ်ကာ မတ်တပ်ရပ်နေရသည်။ ကြာညိုက ရေချိုးခန်းထဲက ယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ထုတ်လိုက်ကာ ရွှေခရုလေးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်က အမွှေးတွေကို ရိပ်ပေးသည်။ ထိုသို့အရိပ်ပေးခံနေရစဉ် အသည်းတစ်ယားယား ဖြစ်လာသည့်အတွက် အနည်းငယ်လှုပ်ရှားမိရာ ကြာညိုက သူမရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံက နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညိုးလက်မနဲ့ ဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင်း -ငြိမ်ငြိမ်နေနော်မမ မတော်တဆထိမိရှမိရင် ကြာညိုနဲ့ မဆိုင်ဘူး -အင်း…ဟင်း….ဟုတ်ကဲ့ပါ ရိပ်လို့ပြီးတော့ ရေဆိုဝတ်လေးနဲ့ ပြောင်အောင်သုတ်ပေးပြီး ကြာညိုက မြနွယ်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို လျှာနဲ့ယက်လေသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြစ်ပြီး မက်တပ်ရပ်နေတဲ့ မြနွယ်တစ်ယောက် အနေအထားကို အပျက်မခံရဲ……။ သို့သော စိတ်ကဆူလာသဖြင့် ခါးလေးကို ကော့ပေးနေမိသည်။ ရင်ထဲမှာ အဝေးကပြေးလာတဲ့ လူတစ်ယောက်လို မော ဟိုက်နေသည်။ မတ်တပ်ပင်အနိုင်နိုင်ရပ်နေရသည်။ သူမဆန္ဒမပြည့်ခင် ကြာညိုက ရပ်လိုက်သည်။ ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်နေသောကြောင့် မရိုးမရွဖြစ်သွားသည်။ သို့သော်ကြာညို့ကို တော့ ဘာမှမပြောရဲ……။ ကြာညိုက ပစ္စည်းတစ်ခုကို သွားယူလာသည်။ ရာဘာလိင်တံကြီး……. ။ ထို့နောက်ကြာညိုက ခုတင်စောင်းတွင်ထိုင်ကာ မြနွယ်ကို သူမအန်းလာရန်ခေါ်သည်။ မနီးမဝေးရောက်လာတဲ့ မြနွယ်ရဲ့ လည်ပါတ်ကြိုးလေးဆွဲ၍ သူမအနားထိ တိုးကပ်စေကာ ရာဘာလိင်တံကြီးကို မြနွယ်ရဲ့ရွှေခရုလေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခုလုပ်ကို ဖွင့်လိုရာ ထိုအတံကြီးက လည်၍ မြနွယ်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားစေပါသည်။
မြနွယ်မတ်တပ်မရပ်နိုင်တော့ ။ဒူးထောက်လျှက်ခွေကျကာ ပါးစပ်က တအင်းအင်း ညည်းညူနေရသည်။ ကြာညိုကာ သူမရဲ့ ရေလဲ ထဘီကို ခွှတ်လိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကား၍ မြနွယ်ရဲ့ဆံပင်တွေကို စောင့်ဆွဲကာ ရွှေခရုလေးနဲ့ အနီးဆုံးနေရာအထိ မြနွယ်ရဲ့မျက်နှာကို ဆွဲယူလိုက်သည်။ မြနွယ်နဲ့ ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ဘဲ ကြာညို့ကို လျှာလေးနဲ့ ပြန်လည်ပြုစုပါစည်။ သိပ်မကြာခင်နှစ်ဦးလုံးစန္ဒပြည့်သွားကာ ကြာညိုက အိပ်ယာပေါ် မြနွယ်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ခွေကျသွားသည်။ ခဏနားနေကြပြီးမှ ကြာညိုက မြနွယ်ကို ရေးသွားချိုးတော့ဟု ခွင့်ပေးသည်။ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့ မြနွယ်ကို လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့တွေ့လိုက်တယ်။ မင်းညို ဝင်လာတာမြင်တော့ သူမစာအုပ်ကို ချကာ လက်စွဲအိပ်ကို လှမ်းယူသည်။ သူမလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း လက်ထိပ်ဆီက သံကြိုးသံတစ်ချွင်ချွင်ကို ကြားနေရသည်။ ကိုမင်းညိုက သူမကို ပြုံးကြည့်ပြီးနောက် ဦးစွာ ရေချိုးအဝတ်လဲသည်။ မြနွယ်လည်း သူမလုပ်ပေးရမဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေကိုလုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့နှစ်ဦးသား ခုတင်စောင်းမှာ ယှဉ်တွဲလျှက်ထိုင်ကြသည်။ မင်းညိုက နန်းမြနွယ်ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖက်ထားပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်မှီထားစေသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်က မြနွယ်ရဲ့ လက်ထိပ်ခတ်ခံထားရတဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေကို ဆော့ကစားနေသည်။ ချစ်သူရင်ခွင်တွင်းမှာ ဒီပုံစံအတိုင်းရှိနေရသည်ကို မြနွယ် ကြည်လည်းကြည်နူးပါသည်။ ရှက်လဲရှက်ရပါသည်။ မင်းညိုက အတွေ့အကြုံတွေ ပြန်ပြောပြခိုင်းသဖြင့် ရှက်ဝဲဝဲနှင့် ပြောပြရသေးသည်။ နောက်တော့ မင်းညိုက မြနွယ်ကို သနားသလို ဖြစ်လာသဖြင့် လက်ထိပ်တွေကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့နှမြောသလိုပင်။ လည်ပင်းမှာ လည်ပါတ်လေးနဲ့ လက်မှာ လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ဆို မြနွယ်က ပို လှသည်ဟု သူထင်သည်။ နောက်တော့နှစ်ဦးသား ထမင်းဆင်းစားကြပြီး မြနွယ်ရဲ့ အရိုက်ခံထားဏတဲ့တင်ပါးကို ဆေးလိမ်းပေကား နှစ်ဦးသားချစ်ရည်လူးကြသည်။ နောက်ပိုင်း မြနွယ်လဲ သူမဘဝကို သဘောကျလာသည်။ နန်းကြာညိုက ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးပြီစတိုင်း မင်းညိုရဲ့ပြုစုယုယမှုတွေကို အမြဲခံစညးရသဖြင့်ကျေနပ်သည်။ ထို့ထက်ပို၍ မင်းညို ချထားသော အစီအစဉ်တွေကိုတော့ မြနွယ်မသိရှာ…..။
နှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါ မြနွယ်ကျောင်းမှာ ပြသနာတစ်ခုတတ်ပါသည်။ စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ကလေးတွေကို ရိုက်မိလို့ပါ။ ကလေစတွေထဲက တစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေက အကောင်ကြီးကြီးတွေဆိုတော့ ငါးချက်လောက် အရိုက်ခံရတာကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ကာ အင်တာနက်တင် ပြသနာရှာသည်။ မြနွယ်တို့လဲ အလုပ်ကို မထိခိုက်ပေမဲ့ သတိပေးခံရသည်။ သတင်းကလဲ နာမည်ကြီးသွားသည်။ အခွင့်ကောင်းကို စောင့်နေသော မင်းညိုက တစ်ဆင့်တတ်ရန် ကြံလိုက်သည်။ ကျွီကနဲတံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ ကြာညို အခန်းတွင်းဝင်လာသည်။မြနွယ် ကျောင်းကပြန်ရောက်ကတည်းက ရေချိုးအဝတ်လဲထမင်းစားစေပြီး ဒီစတိုခန်းလေးထဲပိတ်ထားတာ။ အခုမှလာခေါ်သည်။ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိစ္စအတွက် ကြာညိုနဲ့ မင်းညိုက သူမကို အပြစ်ကြီးကြီးပေးတော့မည်ကို ရိပ်မိသည်။ သူမတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းရောက်တော့ မြနွယ်က ဒူးတုပ်ထိုင်နေပြီး မင်းညိုက ခုတင်ပေါ်ထိုင်လျှက် ကြာညိုက ဘေးမှာမတ်ဆပ်ရပ်ကာ သူမကို အပြစ်ကြှးကြီးမားမားကျူးလွန်ထားသောရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်လိုဝိုင်းကြည့်နေကြသည်။ မြနွယ်လဲ ရှုက်ရွံ့သိမ်ငယ်မှုတွေနဲ့ခေါင်းကို ငုံ့ချထားမိသည်။ မမ….ကို့အပြစ်ကိုယ်သိလား….. သိပါတယ်……။ မမကို အပြစ်ပေးပါ…….။ ပေးမှာ အပြစ်က ကြီးတော့ အပြစ်ဒဏ်လဲ ကြီးမယ် လက်ခံလား…… ဟုတ်ကဲ့ လက်ခံပါတယ်……..။ ကဲဒါဆိုထ အဝတ်တွေဆွတ်လိုက်……..။ ကြာညိုရဲအမိန့်အတိုင်း မြနွယ် အဝတ်တွေချွတ်လိုက်သည်။ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားတဲ့ မြနွယ်ကို လက်ပိုက်ပြီးမတ်တပ်ရပ်စေသည်။ ဘယ်နှချက်ရိုက်မယ်ရယ်လို့မပြောပဲ ခြေသလုံးနဲ့ တင်ပါးတစ်လျှောက်ကို ရိုက်နှက်တော့သည်။ ရွှမ်း..ရွှမ်း…ရွှမ်း….ရွှမ်း ဟူသောအသံများနဲ့ မြနွယ်ရဲ့ နာကျင်စွာ အော်ဟစ်သံတို့က ရောထွေးနေသည်။ မင်းညိုကတော့ ရွှေပေါ်မြတင်နေလာသော ဇနီးချောလေးကူရာမဲ့စွာ အရိုက်ခံနေရခြင်းကို ကြည့်ရင်းစိတ်တွေထကြွနေသည်။ အချက်ပေါင်းများစွာ မညှာတမ်းရိုက်ပြီးတော့ မြနွယ်ထိုင်ရက်သားလေးဖြစ်သွားသည်။ မထနိုင်တော့ ။
နာကျင်လွန်းသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်လေးက တုန်ယင်နေပြီး ရိုက်သံသဲ့သဲ့ကို ကြားနေရသည်။ ခဏကြာတော့ ကြာညိုက မြနွယ်….မမကို အပြစ်ပေးတာ မပြီးသေးထ….. ထိုင်ထလုပ်စမ်း…… အမိန့်သံကြောင့် မြနွယ်လည်း ထိုင်နေရာမှထကာ နားရွက်လေးတွေကိုဆွဲပီး ထိုင်ထစလုပ်ရသည်။ ခဏခဥ အပြသ်ပေးခံဖူးပေမဲ့ သည်တစ်ကြိမ်က လင်ယောက်ျားရှေ့တွင်ဖြစ်သဖြင့် ရှက်စိတ်ရော စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပါ ခံစားနေရသည်။ မင်းညိုကလည်း မြနွယ်ကို ကြည့်ကာ စိတ်တော်တော်ကြွနေသည်။ သူမထိုင်ထလုပ်တာ အခါ ၄၀လောက်ရောက်တော့ ကြာညိုက မင်းညိုရဲ့ ခြေရင်းမှာ ဒူးထောက်လိုက်ရင်း ဒီည မမမြနွယ်ကို အပြစ်ပေးမှာမို့လို့ သူမကိုယ်စား ကျွန်မကပဲ အကို့ကို ဖျော်ဖြေပေးပါရစေ…..။ ကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့် မြနွယ်ပါးစပ် အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်။ မင်းညိုက မြနွယ်ရဲ့ စိတ်ကို ရိပ်မိသဖြင့်ကျိတ်ပြုံးလိုက်သည်။ နောက်လက်ခံတယ်ဟုပြောတော့ ကြာညိုက မတ်တပ်ရပ်ကာ သူ့အဝတ်တွေ တစ်လွှာခြင်စချွတ်ချလိုက်သည်။မြနွယ် ထိုင်ထလုပ်နေရင်း ကြာညိုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြည့်နေသည်။ ခဏချင်းမှာပင် ကြာညို ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသည်။ နောက် ခုတင်ပေးကခုံလေးမှာ တင်ထားတဲ့ မြနွယ်ကို ခတ်နေကြလက်ထိပ်လေးကိုယူကာ ကြာညိုက သူမလက်တွေကို သူမဘာသာ လက်ပြန်ခတ်လိုက်သည်။ အခုကစပြီး မမမြနွယ်ကိုယ်စား ကျွန်မအသုံးတော်ခံပါရစေ…. မင်းညိုကလဲ သူ့အဝတ်တွေကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ မင်းညိုရဲ့ခြေရင်းမှာ ထိုင်ချလိုက်ရင်း သူ့ရဲ့လိင်တံကို စုပ်ကာလျှက်ကာ ပြုစုပေးပါသည်။ မြနွယ်လည်းထိုင်ထကို မနားတိုင်းလုပ်နေရင်းနဲ့ ကြာညိုနဲ့မင်းညိုကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ထိုင်ထလုပ်ရင်း ညောင်းညာတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်းသတိမရ။ ခုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ်လက်နှီးနှောနေကြပြီဖြစ်တဲ့ မင်းညိုတို့စုံတွဲကိုသာ ကြည့်နေမိသည်။ ခဏကြာတော့မှ ဆန္ဒပြည့်သွားကြကာ ခဏရပ်ကာ အမောဖြေကြသည်။ မင်းညိုက ကြာညို့ကို လက်ထိပ်ဖြုတ်ပေးပြီး ထိုင်ထလုပ်တာ အကြိမ်အရေအတွက်များသဖြင့် နှေးကွေးလေးလံနေပြီဖြစ်သော မြနွယ်ကို မေးငေါ့ပြကာ….. သနားပါတယ် ညောင်းနေရှာပြီ…… သက်ညှာတဲ့အနေနဲ့ တခြားအပြစ်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ကြာညိုက မြနွယ်ဘက်လှည့်ကာ မမရပ်လိုက်တော့ ပြီးရင် ဒူးထောက်ပြီး ဒီကိုလာခဲ့…… ထိုင်ထလုပ်တုန်းက အားတင်းပြီးလုပ်နေပေမဲ့ ရပ်လိုက်တော့ မြနွယ် ကြမ်းပြင်မှာ ပုံကျသွားသည်။
ဒူးထောက်ပြီးသူတို့ဆီသွားဖို့နေနေသာသာ မောပန်းလွန်းသဖြင့် အသက်ကို မှန်အောင်ရှူနေရသည်။ ကြာညိုလည်း မြနွယ်အခြေအနေကို ရိပ်မိသဖြင့် ရေဘူးတစ်ဘူးယူ၍ သူမအနားသွားက ပါးစပ်နား တေ့ပေးလိုက်ရာ မြနွယ် ဟန်မဆောင်နိုင်စွာ အငမ်းမရသောက်သည်။ အဟွတ်….အဟွတ်…. ဖြည်းဖြည်းသောက်…….သီးရင်း အသက်ပါပါသွားဦးမယ်။ ရေသောက်ပြီးတော့ မြနွယ်သူမကို အပေါ်စီးကမိုးကြည့်နေတဲ့ ကြာညို့ကို မရဲတရဲလေးမော့ကြည့်မိသည်။ ကြာညိုက ပြန်အကြည့်နဲ့စုံသဖြင့် ခေါင်းလေးပြန်ငုံ့ချမိသည်။ ကြောက်ရွံ့မှုထက်သိမ်ငယ်မှုက ပိုနေသည်။ သူမနေရာ လုယူခံလိုက်ရသလိုခံစားရသည်။ ကြာညိုကတော့ အစီအစဉ်ရှိသည့်အတိုင်း ကုလားထိုင်တစ်ခုပေါ် မြနွယ်ကို ထိုင်စေပြီး နောက်မှီနဲ့တွဲကာ လက်ပြန် ကြိုးတုပ်လိုက်သည်။ ခြေထောက်တွေကိုလည်း ထိုင်ခုံက ခြေထောက်တွေနဲ့ တွဲကာ ချုပ်နှောင်ထားသည်။ အဲ့နောက်မှာတော့ ဘဲဥပုံစံ တုန်ခါစက်ငယ်လေးတွေကို နို့သီးခေါင်းလေးတွေမှာ တိပ်နဲ့ကပ်ပေးသည်။ မြနွယ်ရဲ့ မအင်္ဂါထဲကိုတော့ လိင်တံတုတစ်ခုကို ထဲ့ကာ တုန်ခါစေသော ခလုပ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ရင်အုံပေါ်က တုန်ခါစက်တွေကိုပါ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်လိုက်တော့ မြနွယ် မခံရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ကာ ပါးစပ်ကပင် ညည်းညူမိသည်။ ကြာကြာတော့ အသံမထွက်လိုက်ရ။ ကြာညိုက ပါးစပ်ပိတ်သည့် ဘုလုံးတပ်ကြိုးလေးနဲ့ ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ချည်နှောင်လိုက်သဖြင့် ဝူးဝူးဝါးဝါးအသံလေးသာထွက်ရှာသည်။ တွန့်လိမ်ရုန်းကန်နေပေမဲ့ မည်သို့မျှအရာမထင်။ သူ့မမျက်စိရှေ့မှာပင် ကြာညိုက ခုတင်ပေါ်တတ်၍ ပတ်လက်လှန်လှည်းချကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ကားပေးလိုက်သည်။ မင်းညိုက ကြာညို့လက်ကောက်ဝတ်တွေကို ခုတင်တိုင်တွေနဲ့တွဲကာ ကြိုးနဲ့ချည်လိုက်သည်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဘေးတစ်စောင်းလေးမြင်နေရတဲ့ ကြာညို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လှလှလေးကို ခံစားနေရတော့ ခံစားမှုတွေကြားမှပင် မနာလိုဖြစ်နေမိသည်။ မင်းညိုက တုန်ခါစက်ကလေးတစ်ခုကိုယူကာ ကော့ချွန်နေတဲ့ ကြာညို့ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ထိကပ်ကာ ကလိပေးသည်။ ကြာညိုက မင်းညို ပြုသမျှကို တစ်စက်မှမငြင်းဆန်ပဲ ခံယူသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဒုတိယအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို စတင်တော့သည်။ ကလင် ကလင်….ကလင် ကလင် လူခေါ်ဘဲလ်သံကြောင့် ကြာညို ခြံတံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ အခန်းဝမှ ရဲဝေ၊မြမြဦး၊ မြတ်မိုး၊ ယဉ်မင်းစင်တို့စုံတွဲနှစ်တွဲကို တွေ့လိုက်ရသည်။
မရင်းနှီးပေမဲ့ သိနေသည်မို့ ကြာညိုက ပြုံးပြလိုက်ရင်း ဝင်ကြပါ အကိုနဲ့ အမ ဧည့်ခန်းထဲမှာစောင့်နေပါတယ်။ ဟုပြောကာ အတွင်းသို့ဝင်စေပြီစ ခြံတံခါးကို လုံအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ ဧည့်ခန်စထဲရောက်တော့ တီဗီ ရှေ့မှာ ညားကာစလင်မယားကဲ့သို့ကလူ ကြည်ဆယ်နေကြသော မင်းညိုတို့စုံတွဲကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရိုးရိုးတန်းတန်းတော့မဟုတ်။ မြနွယ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ လည်ပါတ် လက်ထိပ် ခြေကျင်း အဆင်တန်ဆာ အစုံအလင်နှင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦးနှုတ်ဆက်ကာ အသီးသီးနေရာယူလိုက်ကြသည်။ မြမြဦးနှင့် ယဉ်မင်းစင်တို့ကတော့ မြနွယ်ကို သာ စိတ်ဝင်တစားငေးကြည့်နေသည်။ အကဲခတ်နေသော မင်းညိုကာ မေးဆတ်ပြကာ ဘယ်လိုလဲ ငါ့ညီမတို့ စိတ်ဝင်စားနေကြတာလား….. နှစ်ဦးသားပြိုင်တူ လိုလို ခေါင်းငြိမ်ပြသည်။ မင်းညိုက ဆက်ပြီး မြတ်မိုးတို့ကော ဘယ်လိုလဲ စမ်းကြည့်မလား….. အာ အကို ကာလည်း ကျွန်နော်တို့က စိတ်ရှိပေမဲ့ မလုပ်ရက်တာသိသားနဲ့……..မြတ်မိုးကပြောသည်။ မင်းလုပ်စရညမလိုပါဘူး ကြာညို လုပ်ပေးပါလိမ့်မာ် မင်းတို့က ထိုင်ကြည့်ရုံပဲ ဘယ်လိုလဲ…..။ ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ မြလေးသဘောတူမယ်ဆို စမ်းကြည့်ချင်တယ်။ ရဲဝေကပြောတော့ မြတ်မိုးက ယဉ်မင်းစင်ရဲ့မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ ကျွန်တော်ကောပဲ ဟုဆိုသည်။ မင်းညိုက အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဘက်သို့လှည့်ကာ ကြည့်တော့ ယဉ်မင်းစင်က ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေ အရမ်းကြမ်းတမ်းတာတွေတော့ မလုပ်ဘူး မှတ်လား ကိုညို….။ နင်တို့ မခံနိုင်တာတွေတော့ မလုပ်ပါဘူးဟာ…….။ ဒါဆိုလဲ စမ်းကြည့်တာပေါ့……. ။ ထိုသို့ပြောနေကြစဉ်မှာပင် ကြာညိုက ဝင်လာကာ အကို ဟိုဘက်အိမ်လေးမှာ အကို မှာထားတာတွေ အားလုံးပြင်ပြီးပါပြီ။ အေး အေး……ဟုဆိုကာ ငါတို့သွားနှင့်မယ် နင်ပြီးမှာ သူတို့ကို ခေါ်ပြီးလိုက်ခဲ့ အဲ့သုံးယောက်လုံးနင့်လက်အပ်လိုက်ပြီ ဟုတ်ကဲ့ မင်းညိုတို့ ထထွက်သွားမှ ကြာညို မြမြဦးနဲ့ ယဉ်မင်းစင်ကို ကြည့်မိသည်။ နှစ်ဦးစလံး အတွေ့အကြုံသစ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေဟန်ရှိသည်။ နန်းမြနွယ်ကတော့ သိပ်မထူး ခြားသလို ကြာညို့ရဲ့ အမိန့်ကိုသာစောင့်နေသည်။ ကြာညိုက ပထမဆုံးအနေနဲ့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ လည်ပါတ်လေးနှစ်ခုကို စာပွဲပေါ်တင်ကာ မနီးမဝေးက ခုံတစ်လုံးမှာသွားထိုင်နေသည်။ ကဲ နှစ်ယောက်စလုံး မတ်တပ်ရပ်ပြီး လက်တွေကို နောက်ပြစ်ထားကြ……..။
မြမြဦးနဲ့ ယဉ်မင်းစင်တစ်ဦးမျက်နှာတစ်ဦးကြည့်ကာ ဖြည်းဖြည်စချင်းမတ်တပ်ရပ်ပြီစလက်တွေကို နောက်သို့ ပြစ်ထားလိုက်သည်။ ကြာညိုက မြနွယ်ကို ခေါင်စညှိတ်ပြလိုက်ရာ မြနွယ်က ချက်ခြင်း သူမတို့နှစ်ဦးကို လက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည်။ ချုပ်နှောင်ခံလိုက်ရပြီးဆိုတဲ့ အသိနဲ့အတူ စိတ်ဝယ် မွန်းကျပ်သော ခံစားမှုကို ခံစားလိုက်ရသည်။ စာပွဲပေါ်က လည်ပါတ်တွေကို ပါးစပ်နဲ့ကောက်ပြီး ငါ့အနားလာခဲ့ကြစမ်း။ နှစ်ဦးသာစ ဘာစကားမှ မဆိုပဲ စာပွဲဘေးထိုင်ချကာ ခါးကို ငုံ့ကိုင်စလိုက်ပြီး လည်ပါတ်လေးတွေကို ကိုက်ယူလိုက်သည်။ နောက် မတ်တပ်ပြန်ထကာ ကြာညို ထိုင်နေရာ အနီးသို့ သွားကြရသည်။ ကြာညိုက သူမတို့ကို ဒူးထောက်စေပြီး လည်ပင်းမှာ လည်ပါတ်ပါတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ မြနွယ်ကို လှမ်းပြောသေးသည်။ မမရေ မမမိတ်ဆွေတွေကို ကြည့်ပါဦး ပါပီလေးတွေနဲ့တူသွားပြီ…….. ခွေးနဲ့ အနှိုင်းခံလိုက်ရတာပါလား ဟူသော အသိနှင့်အတူ သူမတို့စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွားသည်။ အိမ်ငယ်လေးထဲက ဆက်တီခုံတွေ၌ ထိုရင်းမင်းညိုတို့သောက်စားနေကြသည်။ မကြာမီမှာပင် အိမ်တခါးဖွင့်သံကြောင့် သုံးဦးသားပြောလက်စစကားများကို ရပ်ကာ အိမ်ရှေ့သို့လှည့်ကာ ကြည့်လိုက်ကြသည်။ လက်တစ်ဖက်က သံကြိုးသုံးချောင်းကို စု၍ ကိုင်ကာ ကြာညိုက ဦးစွာဝင်လာသည်။ သူမနောက်မှာတော့ လည်ပင်းမှာ လည်ပါတ်ကိုယ်စီတပ်၍ သံကြိုးနဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လိုအဆွဲခံလာရသော ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးသုံးဦး။ သုံးဦးစလုံးကို လက်ပြန်လက်ထိပ်ခတ်ထားသည်။ ထို့နောက် သူမတို့သုံးဦးကို မင်းညိုတို့ရှေ့မှာ ရောင်ဘောင်တန်းလျှက်ဒူးထောက်စေသည်။ အကိုတို့ကို အသုံးတော်ခံဖို့ အကို တို့ရဲ့ ဇနီးသည်တွေရောက်လာပါပြီ။ ကြာညိုရဲ့စကားအပေါ် မြနွယ်က မထူးခြားပေမဲ့ ယဉ်မင်းနဲ့ မြမြဦးကတော့ မျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်သွားသည်။ ယောက်ျားတွေကတော့ တိတ်ဆိတ်စွာ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေသည်။ ပထမဆုံး အသုံးတော်ခံမဲ့သူကတော့ ယဉ်မင်းစင်ဆိုတဲ့ ဟောဒီဆရာဝင်မလေးပဲဖစ်ပါတယ်ရှင်။ ကြာညိုကာ ပြောပြောဆိုဆို ကျန်နှစ်ယောက်ကို အခန်းထောင့်သို့ဆွဲသွားကာ ဒူးထောက်ခိုင်းထားသည်။ နောက် ယဉ်မင်းကို လက်ထိပ်ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေကို စုပ်နယ်ရင်း ငြိမ်သက်နေတဲ့ ယဉ်မင်းကို အဝတ်တွေချွတ်လိုက်ဟု အမိန့်ပေးသည်။
မိမိယောက်ျားအပြင် အခြားယောက်ျားနှစ်ယောက်ပါရှိနေသည်မို့ ယဉ်မင်းတွန့်စုံ့နေမိသည်။ ကြာညို့ကိုလည်း အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ဟုသာသိထားသဖြင့် သူမအမိန့်ကို မနာခံဖို့ အသိစိတ်ကငြင်းသည်။ ထိုအတွက် ရွှမ်းကနဲအသံနှင့်အတူတူ သူမတင်ပါးပေါ် နာကျင်ကျိန်းစပ်ခြင်းကို ခံစားလိုက်ရသည်။ သောက်ကောင်မက ခိုင်းတာကို ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး ။ နွားတွေလို ကြိမ်တို့ပေးရမယ်။ အသုံးအနှုမ်းကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် ခံပြင်းစိတ်က တမဟုတ်ခြင်းထကြွလာသည်။ သို့သော် ကြိမ်လုံးနဲ့ သုံးချက်လောက်ကျောကော့အောင် အရိုက်ခံလိုက်ရတော့ ထိုဒေါသအားလုံးပျောက်သွားကာ သိမ်ငယ်စိတ် ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာသည်။ ကြာညိုက ကျောလည်လောက်ထိရှည်တဲ့ ယဉ်မင်းရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဘယ်လက်မှာ ရစ်ပါတ်ကာ စောင့်ဆွဲလာသည်။ အား….ကနဲညည်းငံနှင့်အတူ ယဉ်မင်းဖြည်းငြင်းစွာ မတ်တပ်ထရပ်လာသည်။ မျက်နှာလေးကလည်း ရှုံမဲ့နေသည်။ ကြည့်နေရင်းမြတ်မိုး စိတ်ပူသလို သနားလည်းသနားသွားသည်။ သို့သော် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲစိတ်ဝင်စားကာ မတားမြစ်မိ။ ယဉ်မင်းကတော့ ဆံပင်အဆွဲခံထားရသည်မို့ခေါင်းမော့နေသည့်အနေအထားနှင့် အဝတ်အစားတွေးကို ချွတ်နေရသည်။ ကိုယ်ပေါ်မှာ မည်သိအဝတ်မှ မကျန်အောင် ချွတ်ပြီးတော့မှ ဆံပင်တွေကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ယဉ်မင်းက သူ့မရဲ့ ဖုံးကွယ်အပ်သော အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားရှာသည်။ သို့သော် ကြာညိုက သူမရဲ့လက်တွေကို ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး ထုတ်တန်းမှာ တွဲလောင်းဆွဲလိုက်သည်။ မဖုံးနိုင်မကွယ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကို မိမိခင်ပွန်းအပြင် အခြားနှစ်ဦးကပါ စိုက်ကြည့်နေသည်မို့. ရှက်ရွံ့မှုနဲ့ ခေါင်းကို ငုံ့ချထားမိသည်။ ကြာညိုက်တော့သူခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကို ဘ်ုင်ဘရေတာ လေးနဲ့တို့ထိကစားနေသည်။ နောက်သူ့မထဲသို့ အဂါင်္တုကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကြာညိုကလည်း သူမရဲ့ ရင်သားတွေကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ကစားနေသည်။ မကြာမီမှာပင် ဘိုင်ဘရေတာ တန်ခိုးကြောင့် ယဉ်မင်းတစ်ဆက်ဆက်တုန်လာရာ ပြီးလုပြီးခင်အနေအထားသို့ရောက်လာသည်။ ထိုအခါမှပင် ကြာညိုက ဘိုင်ဘရေတာ ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ယဉ်မင်းမှာ ဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်သွားကာ ကြိုးကိုစောင့်ရုန်းနေသည်။ ပါးစပ်ကလည်းထပ်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေသည်။ သူမရရှိတာကတော့ တရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကျလာတဲ့ရိုက်ချက်တွေပါပဲ။
တစ်စစတိုးလာတဲ့နာကျင်မှုကြောင့် ရမ္မက်မီးတွေငြိမ်းကျသွားကာ နာကျင်မှုကို ခံစားမိလာသည်။ အထူးသဖြင့် ရင်သားတွေ တင်ပါးတွေလို အသားနုနုတွေ ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ရိုက်ချက်တွေမှာ သူမ နာကျင်မှုထက် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အဓိကခံစားနေရသည်။ ကြာညိုက ရိုက်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး အရိုက်ခံထားရတဲ့နေရာတွေကို ဖွဖွလေးလက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပေးသည်။ စပ်ဖျင်းဖျင်းနာကျင်မှုကို ခံစားရသည်။ ကြာညိုက ထုံးစံအတိုင်ူရင်သားထိပ်ဖူးလေးတွေကို မထိတထိကလိပြန်သည်။ လက်ညိုးလက်မနှင့် ညှစ်သည်။ ယဉ်မင်း တဟင့်ဟင့်နှင့် လူစလွန့်လာသည်။ အရည်တွေ စိုစိစိဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ပေါင်ကြားထဲ ခုဏက လိင်အင်္ဂါကြီး တိုးဝင်လာပြန်သည်။ ကြာညိုက ဘာမှဆက်မလုပ်ပဲ နောက်ဆုတ်လက်ပိုက်ကြည့်နေသည်။ မကြာမီမှာပင် လမ်းဆုံးရောက်ကာ အရုပ်ကြိုးပျက်ခွေကျသွားဝည်။ ကြာညိုက လိင်တံတုကြီးကို ဆွဲထုတ်ကာ ကြိုးကို ဖြည်ပေးလိုက်သည်နှင့် ယဉ်မင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ခွေကျသွားတော့သည်။ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် မြတ်မိုး ထိုင်နေရာမှ ယဉ်မင်းပနားရောက်သွားသည်။ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ခွေကျနေတဲ့ ယဉ်မင်းကို ထူကာ ထွေးပွေ့လိုက်တော့ ယဉ်မင်း တသိမ့်သိမ့်ငိုနေရှာသည်။ မမ အဆင်ပြေရဲ့လား…….. မြတ်မိုးရဲ့အမေးကို ယဉ်မင်းက ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ စောစောက သူမစီမှာပျောက်ဆုံးနေသော နွေးထွေးမှုတွေ လုံခြုံမှုတွေ အင်အားတွေက သူမခင်ပွန်းရင်ခွင်ထဲခိုလှုံရသောအခါ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသလိုခံစားရသည်။ ကြောက်ရွံ့မှု သိမ်ငယ်မှုတွေလဲ လျော့ပါးသွားသည်။ ကြာညိုက မင်းညိုကို လှမ်းကြည့်တော့ မင်းညိုက ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်ပြသည်။ ယဉ်မင်းအတွက်လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့သဘော။ ဒါနဲ့ ကြာညိုလဲ ယဉ်မင်းချွတ်ထားတဲ့ ထဘီကို ယူပြီး ယဉ်မင်းအနားသွားလိုက်တယ်။ မြတ်မိုး သက်ပျင်းချကာ မူလနေရာမှာ ပြန်ထိုင်နေတယ်။ ကြာညိုက ထဘီကို ယဉ်မင်းကို ပြစ်ပေးလိုက်သည်။ ယဉ်မင်းက ရင်လျှားလိုက်သည်။ နောက်မှာ လည်ပါတ်ကလေးပြန်ပါတ်ပေးကာ သော့ခလောက်သေးသေးလေးခတ်လိုက်သည်။ နောက်နှစ်ဖက်ကို လည် လက်ထိပ်ခတ်ကာ လက်ထိပ်သော့နဲ့ လည်ပါတ်သော့ကို သော့ခလောက်တစ်ခုနဲ့ တွဲချိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ယဉ်မင်းရဲ့ခေါင်းကို ပွတ်သပ်ကာ သိပ်တော်တဲ့ကောင်မလေးဟု ပြောလိုက်သည်။ ယဉ်မင်းမျက်နှာမှာ သိသိသာသာ အပြုံးတစ်ပွင့်ပေါ်လာသည်။
ကြာညိုက လည်ပါတ်ကြိုးကလေးကို ဆွဲသွားက မနီးမဝေးမှာ ထိုင်နေသော မြတ်မိုးလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်။ ခုဏက သော့တွဲလေးကို ယဉ်မင်းစီပေးကာ မမရဲ့ အရှင်သခင်ကို အပ်လိုက်…….ဟုဆိုသည်။ ယဉ်မင်းလည်း မြတ်မိုးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ရိုရိုသေသေ ကမ်းပေးလိုက်မိသည်။ ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်စီက လက်ခုတ်သံတွေကျလာသည်။ ယဉ်မင်းရှက်ဝဲဝဲနဲ့ ခေါင်းငုံထားမိသည်။ ကြာညိုက ယဉ်မင်းကို မြတ်မိုးခုံဘေးက ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောက်ထားစေသည်။ ဒီတစ်ခေါက်အလှည့်ကျတာကတော့ မြမြဦးပေါ့။ သူမအနီးသို့ တရွေ့ရွေ့တိုးကပ်လာတဲ့ ကြာညို့ကို ကြည့်ပြီး မြမြဦးရင်တွေ အရမ်းခုန်နေသည်။ သူမလည်းမကြာခင် ယဉ်မင်းလို ခံစားရတော့မည်။ ကြာညိုက မြမြဦးကို ဆွဲထူပြီး လက်ထိပ်နှင့် လည်ပါတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ အဝတ်တွေချွတ်လိုက်……။ သူကတော့ ယဉ်မင်းလို တွန့်ဆုတ်မနေ။ ခပ်သွက်သွက်ပင် ဝတ်ထားသော အဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်သည်။ ကြာညိုက ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားတဲ့ သူမကို လက်ပြန်ကြိုးစတုပ်သည်။ ရင်းသါးတွေ ဝမ်းဗိုက်နှင့် လကမောင်းတစ်လျှောက် ကြိုးတွေက မြမြဦးကို တင်းကျပ်နေအောင်ရစ်ပါတ်ထားသည်။ နောက်ကောဇောခင်းထားသော ကြမ်းခင်းပေါ် ပတ်လက်လှန်ချစေသည်။ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေသည့်အပြင် မလှုပ်နိုင်အောင် အတုပ်နှောင်ခံထားရကာ ပတ်လက်အနေအထားနှင့်သူမကို ယောက်ျားသုံးယောက်သာ ဆန္ဒရှိလျှင် တတ်ကျင့်ရုံပင်။ ထိုမျှအထိ အကာအကွယ်မဲ့နေသည်။ သူမရဲ့ ဆီးခုံပေါ် ကြာညိုက ဆပ်ပြာဆီအချို့သုတ်လိမ်းလိုက်သည်။ အေးကနဲခံစားမှုနှင့်အတူ ရင်ခုန်မြန်လာသည်။ မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားပေမဲ့ အမွှေးအမြင်တွေကို ရိတ်ပစ်နေမှန်းအထိအတွေ့ခံစားမှုကြောင့်သူမသိသည်။ ရင်ခုန်မြန်လွန်းမက မြန်လာသည်နှင့်အတူ မောဟိုက်လာသောကြောင့် အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက်ထားမိသည်။ မကြာမီမှာပင်ရေစိုဝတ်နဲ့ သုတ်သက်ပေးခြင်းကို ခံစားရသဖြင့် တောရှင်းပြီးကြောင်းသိလိုက်သည်။ ထိုအခါမှ သက်ပျင်းကို ချကာ အသက်ကို မှန်မှန်ရှူနေမိသည်။ မျက်လုံးမှိတ် အမောဖြေရင်းလှဲနေတာ အတော်ကြာသည့်အထိ မည်သည့် ထိတွေ့မှုမှရောက်မလာသဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည်လိုက်သည်။ သူမမြင်ကွင်းထဲသို့ သူမကဲ့သို့တစ်ကိုယ်လုံးတုပ်နှောင်ခံထားရသော မြနွယ်ရဲ့ပုံရိပ်က ဝင်လာသည်။
ကြာညိုက သူမတို့နှစ်ဦးကို မျက်နှာချင်းဆိုက် ဒူးထောက်စေကာ လိင်အင်္ဂါထဲ ယောက်ကျားလိင်တံအတု တစ်ချောင်းစီထိုးထည့်လိုက်ပြီး ပြုတ်မကျအောင် ခါးမှာကြိုးနဲ့ သိုင်းချည်ပေးထားသည်။ ခလုတ်ဖွင့်လိုကိတော့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်လုံး ငရဲလားနတ်ပြည်လားမခွဲခါးနိုင်သော ခံစားမှုကို ရသွားသည်။ တအင့်အင့်နဲ့ အော်ညည်းနေသည့် သူမတို့နှုတ်ဦးကို ဆံပင်စောင့်ဆွဲကာ ခေါင်းတွေမော့လာတော့ နှုတ်ခမ်းချင်းတင့်ပေးလိုက်သည်။ မြမြဦးက ကြောင်အနေပေမဲ့မြနွယ်က မြမြဦးရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံနမ်းလိုက်သည်။ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်နှောင်ခံထားရသည်မို့. ပါးစပ်နှင့်ပင် မြမြဦးရဲ့ ရင်သားတွေကို့ ငုံ့ကာ စို့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်ပေါ် ရိုက်ချက်တွေ တရဆက်ကျလာသည်။ အထူးသဖြင့် မြမြဦးတစ်ယောက် ဘိုင်ဘရေတာ မြနွယ်ရဲ့ အပြုအစု ရိုက်ချတွေကရတဲ့ နာကျင်မှုတွေ ပေါင်းစုကာ အပြင်အထံခံစားနေရသည်။ သူမတို့ကို ကြည့်ကာ ပွဲကည့်ပရိတ်သတ်လေးဦးမှာ အသက်ရှူရန်ပင်မေ့နေသည်။ ခဏကြာတော့ မြမြဦးတစ်ယောက် ပေါင်တံတစ်လျှောက်အရည်တွေစီးကျကာ ခွေကျသွားသည်။ မြနွယ်ကတော့ တအင့်အင့်ညည်းရင်း ဒူးထောက်လျှက်သားကျန်ခဲ့သည်။ ကြာညိုက မြမြဦးရဲ့ ဘိုင်ဘရေတာ က ခလုတ်ကို ပိတ်ပေးကာ မြနွယ်ရင်သားတွေကို ကြာပွတ်နှင့် အဖျားခတ်တယ်ဆိုရုံလေးရိုက်ပေးသည်။ အား….အင်း….ခပ်နာနာလေးရိုက်ပေးပါ….. ။ သူမသတိလက်လွတ်တောင်းဆိုနေသည်။ ကြာညိုလည်း အနည်းငယ်အားထည့်ကာ ရိုက်ပေးလိုက်သည်။ မကြာလင် သူမလဲ မြမြဦးလမ်းစဉ်လိုက်သွားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားနှစ်ဦး ထိုင်ရမှထလာသည်။ ကြာညို သူမတာဝန်ပြီးပြီမို့ ထိုအခင်းအကျင်းကို ကျောခိုင်းကာ သူမအခန်းဆီပြန်ခဲ့သည်။ သူမ အာသာဖြေရန်လိုနေပြီ။ အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးလာသည်။ စီးမံကိန်းထဲပါသွားတဲ့ လယ်မြေတွေလဲ စက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ ရွာထဲက နန်းကြာညိုတို့လို လူငယ်တွေလဲ ဘဝနေထိုင်မှု အသီးသီးကို မပြောင်းချင်ပဲပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။ နန်းကြာညိုလဲ သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျော်ကတည်းက မင်းညိုက လွတ်လပ်ခွင့်ပေးကာ အရင်းအနှီးပါ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့အိမ်မှာနေစဉ်က အချိန်လုသင်ခဲ့ရသော အပ်ချုပ်အတတ်ပညာလေး အရင်းပြုက အဝတ်ချုပ်သည်။
နောက်အထည်ဆိုင်တွဲဖွင့်ကာ ခုတော့ အထည်အလိပ် အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်မလေးဖြစ်နေပြီ။ မင်းညို တို့မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့ အဆက်အသွယ်မပျက်။ အထူးသဖြင့်တော့ နန်းမြနွယ်တို့ အမျိုးသမီးသုံးယောက်နှင့် အဆက်အသွယ်မပျက်။ ဒီရက်ပိုင်းရွာကို အရမ်းလွမ်းနေသည်မို့ မြစပါယ်တစ်ယောက် ဒီရက်ပိုင်းရွာပြန်ရဦးမယ်ဟုတွေးနေသည်။ မနက်စောစော ကျောင်းလည်းသွားစရာမရှိသည်မို့ အဆောင်ဝန်းက ဒန်းလေးမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်ထိုင်ကာ ဖုန်းပွတ်နေသည်။ ဖုန်းပွတ်နေသော သူမလက်တွေဟာ သတင်းတစ်ခုမှာ ရပ်တန့်သွားသည်။ မိန်းမိန်မီဒီယာက တင်ထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီ ……………..ရွာမှာ လူကုန်ကူးနေသူ လင်မယားနှစ်ဦးအားဖော်ထုတ်ဖမ်းစီး ဟူသောခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ အသက်မရှိသော ဦးမိုးသီး ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ လက်ထိပ်တန်းလန်ူနှင့် ဒေါ်နှင်းဆီ၏ ဓာတ်ပုံ ခွမ်းကနဲ ကျကွဲသွားတဲ့ ဖန်ခွက်သံသဲ့သဲ့ကို ကြာညို ကြားလိုက်သည်။ ဒီကလေးမ သူ့မိဘတွေသတင်းသိလောက်ရောပေါ့ ။ ဒေါ်နှင်းဆီရေ ရှင်ဝဋ်လည်တော့မယ်ဟု စိတ်ထဲက ရေရွတ်ပြီး သူမကားလေးကို ကျင်လည်စွာ မောင်းထွက်လိုက်သည်။ ဖုန်းစခရွင်ကို မယံနိုင်စွာပေးကြည့်နေသော ကောင်မလေးရဲ့ပုံရိပ်က နောက်ကြည့် မှန်ထဲမှာ သေးကာသေးကာဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည်..….ပြီးပါပြီ။